Torolàlana ho lasa mpanazatra ao Pokémon GO | Androidsis
Ny mpitari-dalana lalao kely mba ho lasa mpanazatra ao Pokémon GO
Miaraka amin'ny olan'ny fihinanana bateria, izay efa niresaka torohevitra vitsivitsy izahay, ary ny fandefasana isam-paritra izay azontsika idirana noho ny APK natolotra omaly, mandeha mamaky ny arabe izahay ary mahita ny zavatra atolotry ity lalao video Pokémon GO ity. Ireo mpankafy azy no efa niandry azy efa ela hatramin'ny nahalalana fa niara-niasa tamin'ny Niantic Labs i Nintendo handefa lalao video augmented reality hahafahanao mizaha tanàna sy tanàna hahita ireo Pokémon mahalana indrindra ianao. Kilalao tena izy tena tsy mitovy amin'ny fantatsika ary rehefa natomboka tany amin'ny firenena maro dia maro ny mpampiasa no hanatevin-daharana an'io traikefa io.
Pokémon GO dia lalao video iray izay afangaro ny tontolo tena izy sy virtoaly amin'izay avy amin'ny finday avo lenta findainao dia azonao atao ny milentika ao anatiny ary mizaha ilay manodidina anao hihaza ireo Pokémon rehetra izay miandry anao hahita azy ireo ary hanao azy ireo ho toy ny fanangonana anao. Manana Pokémon zato mahery ianao izay hanana ny toerany manokana izay tsy maintsy ho hitanao rehefa milalao ianao. Lalao video izay manana ho avy be talohany ary ho azonao atao atsy ho atsy ny manampy ny akanjo anaovany azy, antsoina hoe Pokémon GO Plus, izay ampiasaina hankafizana ny lalao na dia tsy mampiasa ny fitaovanao aza ianao.
1 Ny fototry ny Pokémon GO
2 Ny Pokédex anao
3 Ireo ekipa telo: mavo, manga ary mena
4 Ireo zavatra isan-karazany
4.1 Poke Balls
4.3 Atody tsara vintana
4.5 ditin-kazo manitra
4.6 Baure Module
4.7 Toerana mihabe
Ny fototry ny Pokémon GO
Ny zavatra voalohany tokony hatrehinao dia mamorona ny mpanazatra anao amin'ny endri-javatra maromaro amin'ny fanaingoana hisafidianana kely ny fisehoana hita toa ny lokon'ny palitao, ny lokon'ny volo na ireo karazana fiasa somary voafetra ihany. Raha vantany vao noforonina ny anarana sy ny mpanazatra dia handeha any amin'ny efijery lehibe izay ahitantsika fampahalalana tena lehibe.
Satria ny asany lehibe indrindra dia ny mihaza Pokémon, rehefa manana ny GPS miasa isika fanahafana sarintany virtoaly avy amin'ny faritra misy anay. Manomboka eto dia afaka mizaha ny manodidina izahay hahita Pokémons, mitsidika ny PokéStops, izay matetika mifandraika amin'ireo teboka ara-tantara sy tsangambato ampahibemaso, ary mankeny amin'ny Gym izay ahafahantsika mifanatrika amin'ireo mpilalao hafa.
Raha vantany vao mampandre anao ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny vibration fa misy Pokémon eo amin'ny faritra misy anao dia azonao atao ny mandefa ny efijery lehibe mankany safidio izy ary andramo hisambotra azy. Eto no ilalaovan'ny Poké Balls izay hanampy anao hisambotra azy. Miankina amin'ny haavony, mety hitarika anao hampiasa Poké Balls maromaro izy io, izay midika koa fa mahazo Pokémon manana hery lehibe kokoa ianao.
Ny Pokédex anao
Rehefa misambotra Pokémons ianao dia hiakatra, ary arakaraka ny anananao, ny Pokémon azonao trandrahana dia hanana hery lehibe kokoa. Azonao atao ihany koa ny mahazo zavatra matanjaka kokoa toy ny Super Balls izay hahazoanao tombony tsara kokoa hisamborana Pokémon avo lenta. Manoro hevitra anao ny tsy hahavery anao ny fotoana ary hitsidika ny Poképaradas, satria izy ireo dia omena zavatra isan-karazany toy ny Poké Balls na atody hamehezana azy ireo.
Ireo atody ireo ihany dia azo ampidirina anaty «incubator» izay, rehefa avy nandeha lavitra, foy ny pokemon iray fa tsy nanan-anaka ianao taloha. Pokémon GO dia nanome toky fa ny Pokémon isan-jaton'ny Pokémon avo kokoa dia hita amin'ny toerana sasany, izay mandrisika ny fikarohana, ary raha mitsidika tanàna vaovao ianao dia aza mandany fotoana hilalao ny lalao video.
Raha matetika ianao no mahazo Pokémon amin'ny karazany mitovy matetika, dia azonao atao izany asaivo mivoatra ny sasany. Ilaina tokoa izy io amin'ny fidirana amin'ny Pokémon izay tsy sendra anao matetika.
Ireo ekipa telo: mavo, manga ary mena
Iray amin'ireo manintona lehibe an'i Pokémon GO ny ny ady eo amin'ireo ekipa telo misy. Rehefa tonga amin'ny ambaratonga 5 ianao dia afaka mandeha amin'ny gym ary mandatsaka Pokémon. Eto ianao dia hangatahana hanatevin-daharana ny ekipa amin'izy telo. Miparitaka eran'izao tontolo izao ny gym, toy ny PokéStops ary tena zava-dehibe ny fiarahan'ny mpikambana samihafa ao amin'ilay ekipa mba hahazoana fiarovana matanjaka.
Ary, raha eken'ny ekipa hafa ny gym iray dia azonao atao izany ampiasao ny Pokémon anao manokana hihaika azy. Eto ny ady amin'ny Pokémon iray hafa dia hiditra izay ahitanao hetsika roa hifindra avy eo ankavia miankavanana ary koa ny hetsika voadona rehefa manindry ny Pokémon fahavalo. Manomboka eto dia azonao atao ny mampiakatra ny haavon'ny Gym amin'ny Pokémon miaro mba hanomezana bebe kokoa raha avo kokoa ny haavony. Ny zavatra tsara indrindra momba ny fananana ny sarintany hita maso dia ny fahitanao ny lavitra avy any izay tompona gym, mba hiomanana amin'ny fanafihana ary hiezaka ny hitondra azy io.
Ireo zavatra isan-karazany
Izany no zavatra fototra ahafahana mihaza Pokémon any an'ala. Voafetra ny isan'izy ireo ary afaka mividy bebe kokoa amin'ny Poképaradas ianao ary rehefa mihaza Pokémon bebe kokoa ianao. Amin'ny swipe tsotra dia azonao atao ny mandefa azy ireo hikapoka Pokémon ary haka azy io.
Afaka atody hita any an'ala ary toy izany koa ireo Poképaradas. Raha manana iray ianao dia mila ilay incubator ka, aorian'ny dia lavitra dia afaka mametaka ny atody izy ary mahazo Pokémon vaovao.
Atody tsara vintana
Ireo dia azo laniana mahazo teboka traikefa indroa mandritra ny 30 minitra. Raha te hanatsara izany fotoana izany ianao rehefa mihaza dia amporisihina ny fampiasana azy. Izy ireo koa dia azo alaina amin'ny Poképaradas.
Ny incubator voalohany ihany mamela ny fampiasana atody foy izy na dia tsy misy fetrany aza ny fampiasana azy. Ny incubator fanampiny dia azo vidiana hamono atody maromaro indray mandeha miaraka amin'ny vola madinika 150, izay mahazaka atody telo indray mipaka.
Izy io dia ampiasaina hanintonana ny Pokémon izay miafina tsy ho hitan'ny masontsika. Ampitomboy ny index ahafahanao mahita zavaboary any an'ala mandritra ny 30 minitra.
Mikarakara izany manintona Pokémon amin'ny PokéStop iray. Izy ireo dia mandaitra kokoa noho ny Incense ary misy fiatraikany amin'ny mpilalao rehetra manodidina ny PokéStop mandritra ny 30 minitra. Zavatra iray mahaliana rehefa mandeha amin'ny ekipa isika.
Manana ny safidintsika isika mampitombo habaka amin'ny alàlan'ny default dia mamela 250 Pokémon sy atody 9 izy. Afaka manitatra toerana 50 fanampiny misy izy io
Pokémon GO dia lalao video misy maodely freemium, mba azonao atao midira amin'ny fividianana Pokécoins amin'ny volanao manokana, na dia hankafizinao azy aza dia tsy mila mandoa euro na kely aza ianao. Satria amin'izao fotoana izao dia misy ny fisintomana eto amin'ny firenentsika miaraka amin'ny APK, manitsy anao eto ambany izahay.
Sintomy ny APK amin'ny Pokémon GO
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny mpitari-dalana lalao kely mba ho lasa mpanazatra ao Pokémon GO
Juan Arriagada dia hoy izy:
Eto Amerika Latina dia tsy afaka milalao ianao
Valiny tamin'i Juan Arriagada
Ady Ferney dia hoy izy:
misaotra anao no tsara indrindra: 3
Mamaly an'i Ferney Guerra
Ho anao Ferney! Miarahaba: =)
Pokemon Go dia manana olana, maty ny mpizara Nintendo
Sintomy ary apetraho ny fakan-tsary iPhone 6 ho an'ny Android